UKUHAMBA NGEENYAWO EZINGAMA-63 KWIMIBONISO (IZIMVO ZOYILO) - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Ukuhamba ngeenyawo ezingama-63 kwimiboniso (iZimvo zoyilo)
Nantsi igalari yethu yokuhamba ngokunethezeka kwimvula kunye nemibono emihle yoyilo. Kukho izinto ezimbalwa ezinokubutofotofo njengokuzonwabisa kwindawo entle yokuhlamba ephezulu.Yiba nomfanekiso-ngqondweni wakho kula manzi aphezulu obumnandi kwaye ufumaneleyo ilingana nombono wakho wegumbi lokuhlambela eliphupha ngokugqibeleleyo.
Le ndawo yeshawari ikhupha izinto ezilula kunye nobuhle obutofotofo. Indawo yanele ukuba abantu abathathu bayisebenzise kube kanye, kwaye yahlulwe kwigumbi lokuhlambela elinamaqhekeza eglasi kunye neminyango. Amacwecwe amakhulu emarmore ayesetyenziswa kuwo wonke umgangatho kunye neendonga, nkqu nebhentshi eyakhelweyo. Zimbini ii-spout zeshawari zodonga, kunye nespout esinye semvula esivela eluphahleni, ukuze uzive ubutofotofo ngakumbi.
Ukuhamba okumnandi kwishower kufuneka kubonelele ngokuzonwabisa okuzolileyo kunye nokubaleka. Ezinye zezona zinto zifunwayo emva kokuyilwa kweshawa kubandakanya iindonga zeglasi zokujonga okungaphazanyiswanga, amatye endalo ajikelezileyo, isitulo sokuhlala kunye neentloko zeshawari yemvula. Umbala kunye nemvakalo yeshawa idlala indima ebalulekileyo kubume bayo. Umbala wokukhanya ongathathi hlangothi unokugcina izinto ziziva ziqaqambile. Iiglasi ezingqongileyo zinokunika imvakalelo evulekileyo kwaye zisuse imiqobo phakathi kwezithuba kwigumbi lokuhlambela. Abo bafuna ukuziva kwendalo kwishawari banokukhetha amatye ajikeleze ukukhanya okuninzi kwendalo ukunika imvakalelo yokuvasa kwindawo engaphandle.
Hamba kwiiNdawo zokuhlamba
Iingcamango zeTayile zokuhlamba
Ukuhlamba ngeMilo kaMoses
Ukuhlamba iitayile ezinkulu
Yiba nomfanekiso-ngqondweni wakho ufika ekhaya uvela kumhla omde odinayo emsebenzini kwaye uhamba ngqo kwindawo yokuhlambela efudumeleyo epholileyo phantsi kweshawa emnandi kwigumbi lokuhlambela elinenkosi. Yintoni enokuba ngcono kunokuba ne-spa yakho eserene ekhaya?
Abantu kule mihla babeka ipremiyamu eninzi kumagumbi okuhlambela acwangciswe kakuhle ngenxa yexesha elichithwe kuwo ngaphakathi kosuku. Njengoko izindlu zangasese zithathwa njengenye yezona ndawo zisetyenziswa kakhulu endlwini, uyilo lwayo akufuneki lukholise kuphela kodwa lusebenze kakuhle.
Ngabaninikhaya abangakumbi abazilungiselela indlela yale mihla yoyilo lwegumbi lokuhlambela, hamba kwiishawari sele kuyinto eqhelekileyo. Ezi ndawo ngoku ziye zaba yindawo yokuphumla kunye nokuphumla. Zihambile iintsuku apho igumbi lokuhlambela linendawo yokugcina amanzi ecacileyo kunye nendawo encinci yeshawari. Ukuhamba kwimvula ngoku sele kunikezelwe ngokupheleleyo ngemibhobho ye-spa, iishawari ezishushu, iiseti zamampunge kunye nendawo yokuhlala. Kumninikhaya othanda ukuzonwabisa ngobunewunewu bayo, ukuhamba kwigunjana kufakiwe ngaphakathi kwigumbi lokuhlambela.
Yintoni ukuhamba ngokuhlamba? Ukuhamba kwishawa kuthathwa njengotshintsho lwangoku kwindawo yoyilo yangasese. Ngokwesiqhelo, hamba kwiishawa azivalwanga-umane ungena kwindawo yokuhlambela ngaphandle kwesidingo sokuwela okanye ukuvula iingcango. Nangona kunjalo, ukuhamba kwisitya kunesigama seambrela, kuba inokusetyenziswa ngeendlela ezininzi.
Okokuqala, kwaye esona sizathu segama laso kukuba ukuhamba kwindawo yokuhlambela yiyo nayiphi na indawo yeshawari engathintelekiyo emnyango kwaye inokufikeleleka ngokungena nje. Isondele kwinqanaba lomgangatho wendawo yangasese, utshintsho oluncinci kubude bomgangatho. Ingafakwa ngohlobo oluthile lokwahlulahlula njengepaneli yeglasi enye esebenza njengokwahlulahlula kwezinye iindawo zangasese. Kuyilo oluthile olungathandekiyo, ukuhamba eshaweni ligumbi elahlukileyo okanye igumbi elinendonga ezintathu zisebenzisa iithayile, ilitye lendalo okanye iibhloko zeglasi.
Ukuhamba kwindawo yokuhlambela kunokuba yiyo nayiphi na indawo yokuhlambela ebandakanya iindonga ezintathu kunye nepani yesiseko. Ezi modeli zikhethiweyo zihlala zenziwe ngeglasi ye-fiberglass, iza ngobukhulu obahlukeneyo kwaye ifuna indibano ethile ngaphambi kofakelo
Nangona kunjalo, kolunye uyilo, ukuhamba eshaweni kunokubandakanya umnyango weglasi. Iglasi yinto ekhethwe kakhulu emnyango weeshawari kuba ayenzi ukuba isithuba siziva sincinci kwaye kulula nokucoca.
Kwizindlu ezineendawo ezinkulu ezikhoyo, hamba kwimvula zihlala ziphuculwa ukuya kuseto lobunewunewu, zigcwaliswe ngebhafu yespa, isinki yamampunge, indawo yokuhlala kunye nokugcinwa,
Apha ngezantsi siphonononga ukuhamba okumnandi kuyilo lweeshawari kunye neempawu zabo ezimbi kunye nezinto ezintle. Ukukunceda ukuba ulinganise ukhetho lwakho kunye nokukunceda uthathe isigqibo sokuba loluphi uyilo olulungele wena, Nazi ezinye zeenzuzo kunye nezinto ezingalunganga zokuhamba ngeshawa.
Izibonelelo zokuhamba ngeshawa:
Igalelo kwimpembelelo yonke yekhaya lakho -Hamba kwimvula zizongezo ezintle emakhayeni, ezenza ukuba zibonakale zintle kwaye zintle. Inegalelo kwisibheno sobuhle, inika i-vibe entsha kwaye ibolekise ubumnandi beli xesha kungekuphela kwigumbi lokuhlambela kodwa nakulo lonke elingaphakathi endlwini.
Ugxininisa ukuziva kwesithuba -Ngoyilo lwayo oluvulekileyo kunye nembonakalo engaxinaniswanga, hamba kwiishawari zinika izindlu zangasese imo yendawo eyenza ukuba zibonakale zinomoya kwaye zinokuphefumla. Ukuhamba kwisitya sokuhlambela kukwahlala kusetyenziswa izinto ezininzi ezinjenge-glass kunye ne-glazing eyenza amagumbi okuhlambela abonakale emakhulu ngokuvumela amehlo ukuba abone i-intshi nganye yendawo esele ikho.
Yenza indawo egxile kuyo -Uhambo oluyilwe kakuhle kwisitya sokuhlambela lunokusebenza njengeyona nto iphambili kwindawo yokuhlambela, ngakumbi ukuba igqityiwe ngezinto ezothusayo ezinje ngeetayile zeglasi okanye ilitye lendalo.
Isuti kuyilo lwangoku okanye lwangoku Uyilo lokuhamba kwimvula luyilelwe ukufumana inguqu egudileyo kunye nokujonga okuqhubekayo. Inkangeleko yayo ehlengahlengisiweyo ihambelana ngokugqibeleleyo namakhaya aphefumlelweyo anamhlanje, kodwa inokudibana kuyilo lwesiko ngokunjalo. Kwakhona, hamba kwiishawa zihlala zisebenzisa into ebonakalayo enje ngomnyango ongenamthungo okanye ongenachaphaza owenza uyilo oluqhubekayo olungakhuphisani nokuqwalaselwa nolunye uhlobiso.
Uyilo oluqhelekileyo -Konke ukuhamba kwimvula kulungiswa ukuhlangabezana neemfuno ezithile zomntu. Oku kufanelekile ngokwesiko kuxhomekeke kubume kunye nobungakanani bendawo yakho yangasese ekhoyo. Ukuhamba kwiishawa kukwaziwa ngokungafaniyo. Xa kuziwa kubuhle, ukuhamba kwisitya kunika amathuba angapheliyo kuyilo njengoko kunokugqitywa ngezinto ezahlukeneyo kwaye zinikezelwe ngezinto ezahlukeneyo. Inokuyilwa ukulungiselela naluphi na uhlobo lwamalungiselelo okanye amanqaku kwaye inike ukhetho oluninzi lobeko okanye ubumbeko ngokuxhomekeke kwindawo yakho yangasese. Ukuba ubungakanani bendawo esele ivumelekile, abaninimzi banokwakha indawo yokuhlambela ngebhafu eyahlukileyo, ezinye zigcinwa kunye nezihlalo.
Kulula ukuGcina Uninzi lwabantu luhamba kwiishawa olunendawo ethe tyaba engashiyi ndawo yobumdaka nobumdaka ngeenyawo. Kwakhona, kulula ukuyicoca kuba konke ekufuneka ukwenzile kukungena ngaphakathi kwaye yonke into ifikeleleka ngokulula. Kuxhomekeke kuhlobo lwempahla yakho yaphantsi, ulondolozo luba sisilungiso esikhawulezayo nesilula.
Ukufikeleleka ngakumbi -Ukuhamba kweshawa kubonelela ngokufikeleleka okuphezulu kwaye kuvumela umsebenzisi ukuba ahambe ngokukhululekileyo ngenxa yobubanzi bayo.
Ukuhambelana nemigaqo 'yoyilo lweNdalo iphela' -Kuba ukuhamba kwimvula kubanzi kwaye kuhlala kushiye imfuno yomnyango, inemvume eyoneleyo yokufumana zonke iintlobo zabasebenzisi, ngakumbi abantu abadala okanye abo banokuhamba kancinci. Kubasebenzisi ababophele isitulo esinamavili, ukungena nokuphuma kwindawo yeshawari esemgangathweni kunokuba nzima, ngakumbi ukuba indawo ixinene kakhulu. Kwakhona, indawo ephambili yokuthengisa yokuhamba kwimvula kukuba banendawo yokuhlambela ekhuselekileyo kunye notshintsho lomgangatho omncinci, ukuphelisa umngcipheko omkhulu wengozi yokuhamba. Akukho mngeni mncinci ubandakanyekayo. Njengoko kukhankanyiwe ngaphambili, ukuhamba kwimvula kubonelela ngokufikeleleka okuphezulu, okuthi ekubuyiseni kubenze bahambe ngokulula.
Iya kuhlala iminyaka -Hamba kwimvula yaziwa ngokuhlala iminyaka njengoko yomelele kakhulu kwaye inokumelana nokunxiba kwemihla ngemihla kunye nokuqhekeka kokusetyenziswa rhoqo. Ukuba ifakelwe ngokufanelekileyo kwaye yakhiwe ngezinto ezifanelekileyo, inokusebenza njengeendleko ezifanelekileyo zotyalo-mali lwexesha elide eziza kukunika izibonelelo ezininzi ekuhambeni kwexesha. Xa kuziwa kuyilo, hamba kwiishawa ziyaziwa ngenkangeleko yazo ezingapheliyo ezingaphumiyo kwisitayile.
Ukunika indawo yokuphumla nokuphumla -Hamba kwimvula unika indawo yokuphumla, ukuphumla kunye nokubuyela umva. Isithuba esikhulu kunye noyilo oluvulekileyo lukwenza uzive ngathi unyathela i-spa ngalo lonke ixesha usebenzisa igumbi lokuhlambela.
Ilula kwaye ibonelela ngokusebenziseka lula -Abantu abaninzi bayathanda ukusebenzisa ishawa kunokuba bathathe ibhafu elula kuba iyakhawuleza kwaye ilunge ngakumbi. Oku kuluncedo ngakumbi ngentsasa, xa ungenalo ukonwaba kwexesha ngaphambi kokuya emsebenzini. Uyilo lwayo luchaneke kakhulu nayo-ilula njengokuhamba ngqo ungene kwisitya sokuhlambela kwaye uyonwabele ibhafu yakho. Ukuba ukuhamba kwakho kwishawa kuneempawu ezinje ngebhafu, ilize okanye isinki, yonke imisebenzi ekufuneka uyenzile ukuze ulungele ibekwe kwindawo enye, ngenxa yoko kuncitshiswa isidingo sokuhamba usuka kwenye indawo uye kwenye.
Yonyusa ixabiso lekhaya lakho -Naliphi na ikhaya likhangeleka ngakumbi xa lisiza kunye nokuhamba okumnandi kwishower. Yonyusa ixabiso lekhaya lakho, elenza libe nomtsalane ngakumbi kubathengi abanokubakho kwimeko yokuthengiswa kwakhona.
Igumbi lokuhlambela eliphefumlelweyo elidibanisa indawo yokuhamba kwigumbi lokuhlambela kunye nebhafu, kwaye ikwabonisa ukuqonda okubalaseleyo. Imigangatho ziithayile zemabhile ezilula, kunye neethayile ezincinci zemosaic phakathi kwethayile nganye, esebenza njenge grouting. Ukutshitshiswa embindini wesithuba ityhubhu yentsimbi ekhululekileyo emile ngokwahlukileyo. kunye neshawari evaliweyo esetyenzisiweyo esebenzisa iithayile zangaphantsi zemabhile kumgangatho wayo nakwiindonga. Ibhafu entle yentsimbi yentsimbi yenza indawo ephambili enomdla kwaye yindawo entle yokuntywila kunye nokuphumla.
Iingxaki zokuhamba kwisitya
Ukujikeleza komoya -Ngenxa yokuvuleka kokuhamba kwimvula, bathambekele ekubandeni. Ababambeki ngokufudumeleyo kwaye ngamanye amaxesha banokufuna ukufakelwa okongeziweyo komgangatho ofudumeleyo.
Kubiza kakhulu kunolunye uyilo lweshawa -Ukuhamba kwimvula ngokubanzi kubiza ngaphezulu kweeshawari eziqhelekileyo ngenxa yezinto ezizisebenzisayo kunye neempawu zayo eziphambili. Ngokwesiqhelo, ukuhamba kwimvula kufuna inkqubo yokuhambisa amanzi ecwangciswe kakuhle kunye nokugqitywa okukhethekileyo. Kuba ukwakha indawo yokuhlambela kukwajongwa njengeyona projekthi iphambili, kufuna ufakelo lobungcali ngaloo ndlela kuvelisa iindleko ezongezelelweyo zabasebenzi. Ukuhamba kwangaphambili kwiiyunithi zeshawari kuyafikeleleka kwaye kunokuqwalaselwa njengenye indlela elungileyo. Kucetyiswa ukuba ngaphambi kokuzibophelela ekufakweni kwayo, qiniseka ukuba uvavanya uhlahlo-lwabiwo mali lwakho kuqala.
Ingozi yeSlip Ngokwesiqhelo, hamba kwiishawa unenqanaba lomgangatho ofanayo kuyo yonke indawo, nangona kunjalo kuyilo lwesiko kunye nezizathu ezibonakalayo, abanye bahamba kuyilo lokuhlamba babonisa iqonga eliphakanyisiweyo okanye i-zocalo ekufuneka inyathelwe ukuze ungene kwindawo yokuhlamba. Ukuba akunyamekeli xa ungena ekuhlambeni, i-mone inokufumana umngcipheko wokukhubeka okanye ukutyibilika. Qiniseka ukuba uyayithathela ingqalelo le ngozi njengoko ucwangcisa ukuhamba kwakho kuyilo lokuhlamba.
Amanzi ayakha -Kuba ukuhamba kwimvula kuhlala kulandela utshintsho oluncinci kwinqanaba lomgangatho, kukho ukutyekela kwamadama amanzi okwakha kwigumbi lakho lokuhlambela. Oku kuxhaphake kakhulu kuninzi lokuhamba kwimvula elandela inqanaba lomgangatho womhlaba kuyo yonke indawo yokuhlambela. Nokuba ukuhamba kwakho kwishawa kuyilelwe kakuhle, kuya kubakho ukubakho kwamanzi abaleke. Nangona kunjalo, le ngxaki inokuthintelwa ngokwakha i-flooring yohambo lwakho lokuhlamba kwi-angle ekoyikekileyo okanye ngokusebenzisa i-zocalo okanye i-splash guard. Izinto ezinganyangekiyo ngamanzi ezinje ngelitye lendalo, isinyithi okanye iglasi zinokufakwa nakwezokugqitywa kwakho ukulungisa lo mbandela.
Kuthatha igumbi elininzi -Ukunikwa ukuba ukuhamba kwimvula kuvulekile kwaye kulandela ubeko oluvulekileyo, bafuna indawo ethe kratya kwaye bathathe indawo enkulu ekhayeni lakho. Ayenzelwanga ukuba ibekwe kwindawo encinci kuba iya kuyenza ijonge ngakumbi kwaye iqine.
Ayiboneleli ngasese kakhulu -Ukuhamba kwimvula kuhlala kuyilelwe ngemvakalelo yokuvuleka kwaye amaxesha amaninzi kunokuba kungenjalo, abanayo, abanazo iingcango okanye inqwaba ye-glazing. Iingcango zeglasi kunye neesahlulelo seglasi aziboneleli bucala. Ukuba ufumanisa ukuba ukuhamba kwakho kwishower akukho bucala, ungasoloko uyilungisa le nto ngokusebenzisa iglasi enqabileyo okanye iglasi enombala endaweni yepaneli yeglasi ecacileyo okanye umnyango weshawa.
Yiprojekthi enkulu -Ukuphucula indawo yokuhlambela yakho uhambe kakuhle kwisitya sokuhlambela kuthatha isixa esikhulu somsebenzi. Ukwakha enye kuya kubandakanya iinkonzo zobungcali, kungoko kukhokelela kwiindleko zabasebenzi ezongezelelweyo. Ayenzelwanga ukuba yenze ngokwakho iprojekthi kwaye unokufuna ixesha elininzi ukuyifaka xa kuthelekiswa namagumbi okuhlambela aqhelekileyo.
Umdibaniso wemibala emhlophe kunye nokhrim yenza iphalethi entle engaphelelwa lixesha enokuhambelana nasiphi na isitayile sangaphakathi. Ukuyinika ubukhulu becala, kusetyenziswa iindlela ezahlukeneyo zokwenza kunye neepatheni. Iithayile zomgangatho we-porcelain zineephatheni ezimthubi ezithe tyaba ezifana nelitye lesepha, isiqingatha sodonga sineenkuni ezithe tyaba, ngelixa indawo yokuhlamba idibanisa iintlobo ezimbini zeethayile zemibala.
Iingcebiso ekwakheni uhambo olufanelekileyo kwindawo yokuhlamba
Yakha ngononophelo olufanelekileyo Ngokwesiqhelo, indawo evulekileyo yeenyawo ezintandathu iyacetyiswa malunga nokuhamba kwimvula ngenxa yokuba nayiphi na indawo ekule radius ithathwa njengendawo yokutshiza. Imijelo yamanzi yenye yeendawo zokuhamba kuyilo lokuhlamba. Ukufumana inkqubo efanelekileyo yokuhambisa amanzi, qiniseka ukuba umgangatho ukhutshiwe okanye uthambeke kancinci ukuze amanzi aphume kakuhle kwaye angakhi kwiindawo ezithile zokuhamba kwakho kwishawari.
Ukugcina kwindawo, sebenzisa ithuba leekona - Nangona kungekho mda kwindlela oyila ngayo ukuhamba kwakho kwishawa, ukuyibeka ekoneni kukugcinela indawo engaphezulu. Esinye isizathu esisebenzayo soku kukuba kulula ukubamba ukutshizwa kwamanzi kwindawo enye.
Cinga ngokhuseleko - Ukhuseleko kufuneka lube yeyona nto iphambili kuyilo lokuhlambela. Uninzi luhamba kwiishawa lisebenzisa izinto ezinganyangekiyo zebhakteria kunye nophahla lwashawa. Ezi zinto azinciphisi umngcipheko wengozi kuphela kodwa ziluncedo ekuhambeni kwexesha kuba kulula ukuzicoca, zicocekile kwaye ziqinisekisiwe ukumelana nokuchaphazeleka rhoqo kukufuma.
Khetha izinto ezinganyangekiyo ukufuma -Igumbi lokuhlambela lihlala libhengeza ukufuma okwenza ukuba kuthambekele kumonakalo wamanzi, ukungunda kunye nokungunda. Ukusebenzisa izinto ezifanelekileyo zokugqiba kunokukunceda ukuthintela ukwenzeka kwayo kwaye kuya kukunika uhambo oluhlala ixesha elide kwisitya. Sebenzisa izinto ezinganyangekiyo njengokufuma njengelitye lendalo, iithayile ze-porcelain, iithayile zeceramic, iglasi kunye nesinyithi ukwakha ukuhamba kwakho kwishawari.
Sebenzisa itreyi yeshawari -Ukuba uya kwinqanaba lesinxibo esifanayo, qiniseka ukubandakanya itreyi yeshawa kuyilo lwakho. Eyona njongo iphambili yetreyi yeshawari kukugcina amanzi ebekwe kwindawo enye, ukuthintela ukuba isasazeke kwezinye iindawo. Ukwakhiwa kwemigxobhozo yamanzi kwindawo yakho yokuhlambela kuncitshisiwe.
Khetha intloko yeshawa efanelekileyo Ngaphandle kokunyusa amava akho okuhlamba, ukusebenzisa uhlobo olululo lwentloko yeshawari nako kunokukunika izibonelelo ezisebenzayo. Iintloko ezinkulu zeshawari zikunika amanzi amaninzi, zilinganisa umphumo wemvula ewayo. Intloko yeshawari yemvula engaphezulu ikhokelela amanzi ngqo ezantsi, ngaloo ndlela kuncitshiswa ukutshiza amanzi ngaphandle kwendawo yokuhlamba kunye nokuthintela igumbi lokuhlambela ekubeni limanzi.
Faka ukugcinwa Ukulungiselela ukusetyenziswa kokuhamba kwakho kwishawa, faka indawo yokuhlambela kuyilo lwakho. I-niche encinci eyakhelwe ukuvulwa eludongeni enokusetyenziselwa ukugcina izinto ezincinci ezinje ngezinto zokuhlamba okanye izixhobo zokuhlamba. I-niche yodonga ikwagcina indawo kuba akukho mfuneko yefanitshala eyongezelelweyo enjengekhabhathi okanye iishelfu.
Faka indawo yokuhlala Abanye bahamba kwiishawa ezinqamlezileyo okanye ezakhelwe kwibhentshi ezinokusetyenziselwa ukuhlala xa uhlamba. Oku kuluncedo kakhulu kubanini bamakhaya abathatha ibhafu ende kwaye bachitha ixesha elininzi ngaphakathi ekuhlambeni. Ngaphandle kwenduduzo eyongeziweyo, eyakhiwe kwibhentshi yokuhlamba ikwasebenza kubasebenzisi abadala okanye abantu abaneengxaki zokuhamba abangakwaziyo ukuma ixesha elide ngokwaneleyo ngelixa behlamba. Ibhentshi yokuhlambela eyakhelwe-ngaphakathi ihlala yenziwe ngeethayile zeceramic ezihambelana nodonga lomgangatho wegumbi lokuhlambela.
Zama ezinye izinto ezongeziweyo -Ukuba unohlahlo-lwabiwo mali olongezelelekileyo, amanqaku awodwa anokongezwa ekuhambeni kwakho kwimvula. Ezi zinto zikhulisa amava okusebenzisa ishawa yakho. Imizekelo yayo yimvula eneesetingi ezizodwa, iijets zamanzi, i-hydro massager kunye nomgangatho ofudumeleyo. Kungakubiza iindleko ezongezelelweyo kodwa ezi ziya kukunika ukonwaba ngakumbi kunye nolonwabo ngelixa uhlamba.
Yiya kuyilo oluhlangeneyo lokuhlambela -Qiniseka ukuba zonke izinto zokuhamba kwakho kwindawo yokuhlambela ziyahambelana ngokudibeneyo kunye nezinye izinto zokuhlambela. Cinga uyilo oluhambayo lokuhamba kwakho kwishawa eliguquka ngokutyibilikayo ukuze wenze indawo evulekileyo yokuhlambela. Qiniseka ukuba zonke izinto ziyadibana kunye ukuze zivelise ukubumbana okuhlangeneyo okungabalulekanga kakhulu. Oku kufanelekile kakhulu kumagumbi okuhlambela anamhlanje nawangoku. Nokuba ufuna ukwenza ukuhamba kwakho kwindawo yokuhlambela njengeyona nto iphambili kwigumbi lakho lokuhlambela, kusafuneka ukuba inxibelelane nezinye izinto zoyilo ngandlela thile.
Cwangcisa ukusetyenziswa kwexesha elide -Kulungile ukuzilungiselela kwangaphambili ukuba ucwangcisa ukuhlala endlwini yakho ixesha elide, ngakumbi xa uzibona uyisebenzisa njengekhaya lomhlala-phantsi. Yila ukuhamba kwakho kwisitya ngendlela eya kuthi ikwazi ukulungiselela iimfuno zakho zekamva njengoko uneminyaka yobudala. Kananjalo unokuyakha ngendlela apho unokufumana ukonwaba okuphezulu kunye nokonwaba ukuba uza kuyisebenzisa ixesha elide.
Le ndlu yokuhlambela ibalaseleyo inemisebenzi eneenkcukacha zethayile kunye nemiphezulu yemabhile kunye nebhafu enkulu yokuntywila neglasi evaliweyo. Isitshixo esineprofayile esezantsi kukuchukumisa okuhle okuqinisa imeko entle.
Sisebenzisa imibala efudumeleyo, engathathi hlangothi, eli gumbi lokuhlambela elinobunewunewu obukhulu. Imigangatho yimarble emdaka, ibekwe ngendlela yeebhondi ezibalekayo, ngelixa imigangatho yeshawari isebenzisa umbandela ofanayo, kodwa kwiithayile ezincinci ezilinganayo. Iindonga zeshawari ziithayile zemarmore ezimdaka ngokunjalo, kodwa iithayile zemibala endaweni yeethayile ezizodwa. Indawo yeshawari ijikelezwe sisakhelo esingaphantsi-kweglasi engaphantsi kweglasi yokujonga ngakumbi. Indawo yokuhlambela ityhubhu kunye namampunge ziyangqinelana, zombini zisebenzisa umthi omdaka omdaka odityaniswe nemabhile emhlophe.
Igumbi lokuhlambela elihle linempembelelo yesimbo saseGeorgia. Isebenzisa indibaniselwano yegolide kunye nesilumko esiluhlaza ukukhanya kunye nokujonga okuhlaziyayo. Iindonga zazinxitywe kwimizobo yegolide yesinyithi, imigangatho isebenzisa iithayile zegranite etyheli, ngelixa imigangatho kunye neendonga zommandla weshawari zigutyungelwe ngokupheleleyo kwi-travertine eluhlaza, ehambelana namalaphu asetyenziswa kwimpahla yendlu kunye namakhethini.
Uyilo lwamva lokuhlambela oluncinci oludibanisa ukugqitywa kwamatye endalo kunye neetiles zangoku zeceramic ezinokugqitywa okhethekileyo Imigangatho kunye nodonga olunye lwalugutyungelwe kwiithayile ezinemibala emdaka ngenkangeleko yokudakumba, nto leyo eyinika umtsalane kwimizi-mveliso. Udonga olude, kwelinye icala, lisebenzisa iithayile ze-porcelain ezineepateni ezithe tyaba ezingwevu, elinganisa ifuthe lamatye endalo. Ibhafu yokuhlambela luhlobo lokungena, olujikelezwe ngodlakadlaka lwelitye eliluhlaza, ngelixa ishawa igutyungelwe zizakhelo zeglasi eziphakamileyo.
Ukuya kukhangeleka icocekile kwaye ikhanya ngakumbi, le yokuhlambela ilula kodwa intle inendibaniselwano elungileyo yabamhlophe kunye nokugqitywa kweenkuni. Imigangatho isebenzisa iithayile ezimhlophe ze-porcelain ezinokukhanya okuyingwevu okulinganisa amatye endalo. Iindonga zimhlophe gca, ngelixa iikhawuntari zisebenzisa ii-laminates zomthi ekugqityeni ukukhanya komthi we-walnut ukongeza ubushushu endaweni. Iindawo zokuhlambela ezi-2 kunye nebhafu yendawo yokuhlambela iyonwabela imbonakalo entle yedama elinamanzi kunye nolwandle njengoko zonke zibekwe ecaleni kweefestile eziphakamileyo. Iindawo ezimbini zeshawari zisebenzisa izahlulo zeglasi ezingafaniyo nesakhelo somthi, ngelixa ibhafu ibhafu yanamhlanje.
Sebenzisa uhlobo olunye kuphela lokugqitywa kwelitye kwigumbi lokuhlambela kunokuba yinto enesithukuthezi, kodwa olu luyilo lwenza ukuba lube namandla ngakumbi, ngokwenza iipateni zisebenzisa iinkozo zendalo zelitye. Igranite emhlophe yayisetyenziselwa imigangatho kunye nodonga - imigangatho isebenzisa iithayile eziqhelekileyo ezingama-30 × 30, ngelixa iindonga zisebenzisa ii-slabs ezinkulu kwaye zenza iphatheni yedayimani, efanayo naleyo isetyenziswa kwimithi yeplanga. Oku kudala umdla onomdla kumgangatho ongaphezulu, kwaye kwangaxeshanye, kukhupha ukulula kunye nokuqaqamba. Ikhawuntari yamampunge yenziwa nje ngeplywood elaminethiweyo elwandle, indawo yeshawari ezimbini ezahlulwe zesahlulo seglasi esingaphantsi, ngelixa ibhafu ibekwe ecaleni kwefestile ukujonga isixeko.
Uyilo lwegumbi lokuhlambela eliphefumlelweyo elinemibala yee-sinous curves zempembelelo yeklasikhi, kodwa ikwasebenza ngokulula ngoku ngokukhetha ukugqiba. Igumbi lokuhlambela lonke ligcina umbala walo omhlophe kunye nokhrim okhanyayo ococekileyo noqaqambileyo. Iindonga zazipeyintwe ngombala okhanyayo okhanyayo, kwaye ezi ndawo zimbini zeshawari zekona zisebenzisa izahlulo zeglasi eziphantsi ngokupheleleyo-ngaphakathi ngelixa ngaphakathi kwayo kwakugqitywe ngemabhile emhlophe ngengqolowa engwevu / cream. Ibhafu yenza ukuba uzive ungowasebukhosini, njengoko ibibekwe kanye embindini wegumbi lokuhlambela, isenza indawo ekugxilwe kuyo yesithuba. Indawo yakhe yeglasi yokuvalela iglasi inika ulingano kunye nobuhle kuyilo lwangaphakathi.
Indawo yokuhlambela yaseMeditera iya kujonga ngakumbi nge-rustic ngokudityaniswa kweenkuni kunye namatye. Zombini iindonga kunye nemigangatho zazigqunywe ziiplanga ze-rustic zokugqiba iithayile zeceramic, ngelixa indawo yeshawari yongeza ukuthungwa ngakumbi ngokusebenzisa amatye omlambo kwisamente egalelwe imigangatho yayo kunye nomtya wodonga. Indawo yokuhlambela eseleyo iyigcina ilula - ukukhanya kweendonga ze-beige, ukugqiba ukugqiba isiseko selize kunye ne-quartz emhlophe kwiikhawuntari zayo.
Uyilo lwale mihla lokuhlambela luhamba yonke into kunye nothando lwayo olucacileyo lweemabula. Zonke iindonga kunye nemigangatho zazinxitywe ngeethayile zemabhile, ngobukhulu obahlukeneyo ukunceda ukucacisa indawo nganye kwenye. Indawo ephambili yokuhlambela isebenzisa iithayile ezisisiseko ezingama-30 × 30 kulungelelwaniso lwediagonal, kunye nemigangatho yendawo yeshawari isebenzisa iithayile ezincinci zemosaic. Iindonga zazinxitywe ngamatye emarmore emhlophe, ebonisa ubuhle bendalo.
Olu luvo olukhulu kwabo bafuna ukufezekisa olo jongo luhle, kodwa banendawo encinci. Uyilo olu ludibanisa indawo ezimbini zeeshawari kunye nebhafu, kwaye yahlulwe kuphela ngezocalo ephantsi kakhulu. Iindonga zazinxitywe ngetreyini eyenziwe ngomthi ethe nkqo, ngelixa imigangatho isebenzisa iziqwengana ezomileyo ezomileyo ezaphukileyo zegranite enemibala ekhilimu.
Umdibaniso wesitayile yoyilo esiqhelekileyo kunye nephalethi yala maxesha ngokuqinisekileyo iyakufanela oku kuyilwa kwebala yokuhombisa kwaye yongeza kwisibheno sayo. Ukuya kumbala wombala omhlophe grey olula ngokwenyani, kuyanceda ukuvelisa iinkcukacha zokugqitywa kunye neziqwenga zefanitshala. Imigangatho isebenzisa iithayile zemarmore emhlophe ezinamacala amathandathu, ngelixa iindonga zazipeyintwe ngombala omhlophe, kuyilo lwepaneli kwindawo yamampunge. Ewe kunjalo, inekhabinethi emhlophe efanelwe ngamaplanga emhlophe enezinto zokubala ezingwevu. Indawo yokuhlambela kwelinye icala, isebenzisa iithayile zentsimbi ezingwevu ezindongeni nasemigangatho yayo, ukwenza umahluko ngokuchasene nendawo yokuhlambela emhlophe ikakhulu. Ukongezwa kwesihlalo kunye ne-ottoman yesikwere yongeza kwisibheno esihle segumbi lokuhlambela.
Uyilo oluhle lokuhlambela olusebenzisa ubeko oluhle kakhulu ukufezekisa uyilo olulula kodwa oluhle. Isebenzisa ukukhanya kwe-teak yeenkuni ukugqiba iithayile zekheram ukunika uluvo lwe-rustic, ngelixa iindonga ezimhlophe ezimhlophe kunye nophahla luyinika ucoceko lwanamhlanje. Ngokwenyani kubuhle bayo banamhlanje, into engento yento ekhawuntyiweyo enxitywe ngombala omhlophe oqinileyo, kunye neesinki zeceramic ezingaphantsi kwentaba kunye nezibuko ezingenabala. Indawo yokuhlamba inezahlulelo zeglasi kunye neminyango, kwaye isebenzisa iityuli zesanti ezingwevu zokuhombisa iithayile ze-porcelain ezindongeni nasemigangatho yayo.
Ukuncamathela kwiphalethi elula kusebenza kakuhle ngakumbi kwizithuba ezincinci. Igumbi lokuhlambela lisebenzisa kuphela indibaniselwano yeekhrim / beige kwiindonga zombini nakwimigangatho, ukudala uyilo olulula kodwa olunomtsalane lokuhlambela. Kukho indawo yeshawa enezakhelo zeglasi ezingenaso isakhelo kunye nebhafu emise okweqanda ebekwe kanye ecaleni kweefestile ukuze ujonge ukuphumla kwegadi.
Ngaphandle kwesithuba esilinganiselweyo, olu loyilo lwala maxesha lokuhlambela luyakwazi ukwenza uyilo olwahlukileyo. Ekungeneni kwegumbi lokuhlambela ibhentshi ebiyelweyo ebekwe eludongeni enodonga olubengezelayo kunye nefestile encinci. Ukuya ngasekhohlo, uya kubona umnyango weglasi ocacileyo kunye nokwahlulahlula okukhokelela kwindawo yokuhlambela. Ngokuqinisekileyo le ndawo ibonakala njengoko isebenzisa iithayile ezimnyama zeceramic kumgangatho wayo, kunye nelitye elimnyama elisezindongeni, elidityaniswe nophahla olunombala omnyama. Ngaphakathi, kukho ishawa yohlobo oluseludongeni, kunye nesitshingitshane semvula esasisithi cwaka eluphahleni ukuze sizive sendalo.
Ngokuqinisekileyo uya kuziva ngathi ubukhosi ngelixa uhlamba kule ndawo yokuhlambela intle kakhulu. Iindonga zigqunywe ngephepha lodonga lesinyithi kunye neepateni ezichumayo, ngelixa isilingi sinoyilo olwahlukileyo lokuhombisa. Ukuhlawulela ukungabikho kwembono, indawo yokuhlambela isebenzisa izipili ezinesakhelo esimhlophe ukwenza inkohliso yeefestile. Indawo yokuhlamba, kwelinye icala, isebenzisa i-travertine emdaka kumgangatho wayo kunye nasezindongeni, kwaye yahlulwe kwigumbi lokuhlambela elinamagatya acocekileyo eglasi. Embindini kukho indawo enkulu yokubamba eluhlaza eluhlaza, kunye netafile engento enesipili enesipili esinepeni esi-3, kunye nesihlalo esidibeneyo.
Into eyahlukileyo kolu luyilo lwendlu yangasese kukuba imigangatho yayo ephambili ayizizo iithayile okanye amatye, kodwa ngumgangatho wompayini oqinileyo. Oku kwenza ukuba ucoceke ngakumbi kwaye ubeke umva kuyo, uyenze ibonakale ifudumele kwaye ibanda kancinci, eqhelekileyo kumagumbi okuhlambela. Ngenxa yokuba eyona migangatho iphambili ingumthi, inyathelo eliphantsi le-zocalo linceda ukwahlula indawo yokuhlambela kwimigangatho ephambili, kunye neesahlulelo ezingaphantsi kwesakhelo. Iindonga zommandla weshawari zinxitywe ngamatye angwevu amnyama, ngelixa imigangatho yenziwe ziithayile zemarble zemibala emincinci yesikwere.
Uhlobo lwendlu yangasese enesitayile sotshintsho esinobunewunewu obucocekileyo kunye noyilo olulula, kunye nokulula kweendawo zangoku. Ukudibanisa okumhlophe kunye nokungwevu kwesikimu sombala esincinci, esisebenza kuzo zonke iindlela zoyilo. Imigangatho ecoliweyo yenziwe ngamatye emarmore emhlophe, ebekwe kwipateni ye-chevron. Iindonga zipeyintwe ngombala ongwevu, iipaneli ezimhlophe kunye nokubumba, ngelixa indawo yeshawari inxitywe ngamatye emabhile, esenza i-patter yedayimani kunye neenkozo zayo.
Igumbi lokuhlambela lale mihla elihle elinendawo eninzi kunye nengcinga eyodwa yokuzisa ngaphandle ngaphakathi, kusetyenziswa izityalo zokwenyani. Imigangatho yenziwe ngeethayile ze-porcelain, enyuka iqonga apho ibhafu ibekwe kanye ecaleni kwefestile enkulu yemifanekiso. Ukutyalwa kule festile zizityalo zerabha ukukunceda ukuba ubonakale njengenxalenye yembono yangaphandle. Indawo yokuhlambela inefestile yokujonga, intloko yemvula enentloko eyahlukileyo yokutshiza kunye nebhentshi ehleli ngaphakathi.
Igumbi lokuhlambela elincinci elibonisa ngokucacileyo ukuthanda iithayile zemabhile, njengoko yayisetyenziswa kwiindonga zebhafu yonke, kubandakanya necornice. Ukukunceda ulungelelanise ngaphandle, imigangatho ziitayile zekatala enombala wekofu kwaye isilingi yayipeyintwe ngombala okhanyayo we-mocha.
Umbono omhle we-skyline ubonakala kakhulu ngefestile enkulu yefestile yokuhlambela. Imbuyekezo ngemvelaphi yesibhakabhaka esixakekileyo, izinto zangaphakathi kwigumbi lokuhlambela zigcina isikimu sombala esilula esimhlophe kunye neempawu ezithile ezimthubi. Imigangatho isebenzisa iithayile ezimhlophe ze-porcelain, ngelixa iindonga zigutyungelwe ngemabhile emhlophe ngeepateni zokukhanya okulula kakhulu. Indawo yokuhlambela yahlulwe kwigumbi lokuhlambela ngokuphuma kwiglasi ecace gca, ekuvumela ukuba ubonwe ungaphazanyiswa sisixeko ukusuka naphi na kwigumbi lokuhlambela.
Iimpawu ze-Neo-classic kunye nezinto zoyilo zenza le ndawo yokuhlambela izive ngathi ungowasebukhosini. Ukulungelelanisa iskimu sombala esimhlophe esimhlophe, olu luyilo lusebenzisa ubuhle bemarble yendalo njengoko lwalusetyenziswa kuwo wonke umgangatho, kwaye kubandakanya iikholamu ze-faux kunye nexesha elingaphakathi kwendawo yokuhlamba.
Iishawari ezinkulu zinobunewunewu obongezelelekileyo kuba zinendawo eyaneleyo yeempawu ezingakumbi. Ukuba nobunewunewu bendawo, ayinakulungiselela ukuhamba kwisitya kuphela kodwa nakwibhafu, indawo yokuhlambela enkulu enesinki, ezinye iinkqubo zokugcina kunye neziqwenga zefanitshala ezifana nebhentshi, isinxibo okanye into engento. Ngamanye amaxesha, ibhafu ye-spa ifakiwe ekuphumleni okongeziweyo. Ukongeza kuloo nto, iishawari ezinkulu zinokuhlala ngaphezulu komsebenzisi omnye. Eminye imvula emikhulu iza nayo kunye neesinki zayo ezivumela izibini ukuba ziqhubeke nococeko lwazo zonke imihla ngaxeshanye.
Iishawari ezinkulu zinokuqwalaselwa ngendlela eya kuthi zinxibelelane nohambo kwikhabethe. Oku kuluncedo kuba yenza yonke imisebenzi enxulumene nokuzilungiselela kwindawo enye esembindini, ukugcina ixesha kunye nomzamo.
Ukuba nobunewunewu bendawo, le ndawo yokuhlambela yenza indawo yokuhlambela ebanzi kunye nekhawuntari enkulu yamampunge. Icala lasekhohlo linendawo yokuthambisa enezitshizi ezi-2 kunye nendawo yomgubo phakathi, ngelixa icala lasekunene linendawo yokuhlambela enesithuba esaneleyo sabantu ukuba basebenzise ngaxeshanye. Kwindawo enefestile yebhayi yeyona ndawo yokuhlambela ezimeleyo apho indawo yokubasa yombane kunye ne-tv yafakwa eludongeni ngayo, ikuvumela ukuba udibanise ngobunono kwaye ufudumale xa ufuna ukuphumla.
Imibala yendalo kunye neefom ezincinci kule yoyilo entle yokuhlambela ibonisa iimpembelelo zale mihla nezaseAsia. Imigangatho igutyungelwe yi-walnut yokugqiba iithayile zeceramic, ngelixa ezi-2 zeendonga zazinxitywe ngamaplanga. Zonke ezinye iindonga zazipeyintwe ngombala omhlophe-omhlophe, zisenza iishelfu ezixhonywe eludongeni zancamatiswa ngeshokholethi emdaka. Ephakathi embindini wegumbi lokuhlambela yindawo enkulu yokwahlulahlula, ngaphakathi kuyo ibhafu yokuma simahla kunye neglasi engenafreyimu evaliweyo.
Ilungele ukujongwa kweMeditera, olu loyilo lwendlu yangasese ludibanisa imibala efudumeleyo kunye nokugqitywa okulungiselelwe ukufezekisa inkangeleko. Iindonga zendawo enkulu yokuhlamba zisebenzisa izitena zelitye lentlabathi eludongeni lwayo kunye nesileyiti esincinci segolide kwezinye iindonga, zidityaniswe nemigangatho yamatye eqaqambileyo yendalo. Ubume bendonga eludongeni buqedile kwaye ukukhanya kwesibhakabhaka kwindawo yokuhlambela kuyinika imvakalelo yendalo yangaphandle.
Sebenzisa i-pink rose ethambileyo ezindongeni kunika eli gumbi lokuhlambela inkangeleko entle ekhangeleka ngokugqibeleleyo nekhabhathi emhlophe kunye neethayile ezimhlophe zemabhile ezisetyenziswa phantsi nasemadongeni endawo yokuhlamba. Isiphumo siyilo lobufazi kunye nenhle yokuhlambela.
Isithuba esincinci akufuneki sikuthintele ekuyileni igumbi lokuhlambela elinobunewunewu kakhulu. Lo ngumzekelo omhle woko. Le ndawo yeshawari incinci yabekwa kwindawo esisangqa / egobile yodonga ngeefestile ezi-4, isenza ukuba sikhangeleke siqaqambile ngaphandle kwendawo encinci. Iindonga kunye nemigangatho yayinxitywe ngeethayile zesilayidi ezinombala okhilimu, kwaye ineetayile ze-ceramic embindini weendonga. Ukutshatisa iithoni ezifudumeleyo zeethayile, izixhobo zombala wobhedu zisetyenzisiwe. Ukwenza amava akho okuhlamba nokuba onomdla ngakumbi, ngaphandle kwentloko yeeshawari kunye neeshawari zemfonomfono, kukwakho nezitshizi zomzimba ezifakwe ezindongeni.
Ngenxa yokuba le ndawo yokuhlambela inesithuba esilinganiselweyo, iba nobuchule kunye noyilo lwayo. Idrophu yokuhlambela yafakwa kwikona ejikeleze udonga lwendawo yokuhlamba ukuyinceda ilunge, ngelixa ugcina isixa sokugcina onokugcina.
Ngaphandle kobume bayo obume ngokukodwa, yintoni ekhethekileyo malunga noyilo lokuhlambela lulungiselelo lwayo lwe-PWD, njengoko ibeka ii-handrails ezikhokelela kwindawo yeshawari evaliweyo. Yinto ebalulekileyo yoyilo abantu abajongela phantsi, ngakumbi kwiindawo zikawonkewonke. Indawo yokuhlamba ngokwayo ilula kodwa ijongeka ngathi intle kwaye intle. Ibanzi, inokukhanya kwendalo okuninzi okuvela kwiifestile zebay, kwaye isebenzisa iithayile ezinombala okhilimu kwimigangatho nasemidongeni.
Uyilo lwangoku lokuhlambela oluxakeke ngenene ngezixa zeepateni kunye neepateni oza kuzibona, ngaphandle kobungakanani bayo obulinganiselweyo. Imigangatho ngokwayo sele ixakekile, njengoko isebenzisa iithayile zemibala kwiithoni ezahlukeneyo zomdaka, kunye neepateni zamatye endalo. Iindonga kwelinye icala zisebenzisa ukhrimu namatye esepha emdaka, asikwe embindini ngemigca emibini yeethayile ezifanayo ezisetyenziswa phantsi. Isiphumo sisikimu sombala esilula esifanelekileyo kwizithuba ezincinci.
Igumbi lokuhlambela elibanzi limi kanye ecaleni kwegadi engasemva kwendlu, enika indawo ukukhanya kwendalo kunye nembonakalo yendalo eyonwabisayo. Imigangatho yale ndawo yokuhlambela i-walnut yokugqiba iithayile zeceramic, kunye neethayile zemabhile kuzo zonke iindonga. Amampunge asebenzisa i-walnut emnyama kwiikhabhathi zayo kunye nomphezulu omhlophe oqinileyo wekhawuntara. Inxalenye enomdla yoyilo iya kuba yindawo enkulu yokuhlamba embindini wegumbi. Ibanzi kwaye ithe ngqo phambi kwefestile ukuze ube nembono entle ngelixa uhlamba. Isakhelo seglasi esingaphantsi kwesakhelo sikwanceda ukwahlulahlula kwigumbi lokuhlambela, ngaphandle kokuthintela ukukhanya kunye nokujonga kwifestile.
Yintoni eyenza le ndawo yokuhlambela iyingqayizivele kukuba ayinacango, kwaye idityaniswe ngqo kwindawo yokuhlala ngokuvula i-arch. Xa ungena, uya kuyibona indawo engelutho kwangoko, ene-marble kwaye isebenzisa isiseko esigqityiweyo se-wengue. Uninzi lweendonga zipeyintwe ngombala weoatmeal, kodwa iindonga ezazibekwe zililize zambethe iithayile ezimhlophe nezimdaka ngombala. Indawo yokuhlamba kunye nebhafu yahlulwe kwinto engento ngokuvula i-arch nayo.
Ilitye lendalo sesinye sezona zixhobo zidumileyo zokuhamba kwiishawa ngenxa yobuhle bazo obahlukileyo kunye neempawu ezintle ezikuwo. Ezi zinto zithandwa kakhulu ngabanini bezindlu kunye nabaqulunqi kuba bezisa uvakalelo lwendalo kwindawo. Ngaphandle kwalonto, ukuhamba ngamatye kwimvula kunika ukufudumala kwaye kwenza igumbi lokuhlambela limeme ngakumbi kwaye liphumle. Oku kufanelekile kakhulu ukuba ufuna ukufezekisa i-spa enje ngendawo yakho yokuhlambela.
Iindidi eziqhelekileyo zamatye endalo ahamba kwimvula kubandakanya i-travertine, isileyiti, ilitye lematye kunye nemabhile. Iithayile zeTravertine zibonakaliswa ngohlobo olufudumeleyo lwe-beige kubusi obufana neetoni kunye noburhabaxa bomqolo. Oku kuhlala kusetyenziswa kumagumbi okuhlambela anefuthe leMeditera okanye ilizwe elidala. Ubume oburhabaxa be-travertine buyenza ukuba inyibilike kakhulu, nangona kunjalo i-porosity yayo yenye yezona ngxaki zayo ziphambili. Ukuthintela amanzi ekungeneni kwimvula yeetraine, itywina kufuneka lisetyenziswe kwinto leyo. Xa ixutywe nezinye izinto, i-travertine ijongeka ngathi ibukeka kwaye intle.
Isilayidi, kwelinye icala, sibonakala ngenkangeleko yaso ecekeceke kunye nombala othobekileyo. Ngama-hues aphuma kumagrey amnyama ukuya kwiindawo ezifihlakeleyo ezipholileyo, olu hlobo lwelitye lendalo zihlala ziza kugqitywa matte. Iyaziwa ngokuzinza kwayo kunye neempawu zokumelana namanzi ezenza ukuba zilungele indawo ezihlala ziveliswa ukufuma. Izicelo eziqhelekileyo zesilayiti kukuhamba okwangoku okuphefumlelweyo kwimvula.
Ingqalutye lukhetho oluphezulu kwimvula kunye namagumbi okuhlambela ane-spa enje ngenkangeleko. Ngokwesiqhelo ibekwe ecaleni komgangatho, le nto inika imvakalelo yokuthambisa yeenyawo ngelixa uhlamba. Ngaphandle kwembonakalo yayo erustic, ilitye eliqhwalelayo liyatyibilika ngokwemvelo, ukunciphisa umngcipheko weengozi kwindawo yokuhlamba. Amatye abukeka amhle ngakumbi xa edityaniswe nezinto ezichaseneyo ezifana neglasi kunye nendawo egudileyo.
I-Marble yimbonakalo yobugcisa beklasikhi kunye nobuhle obungapheliyo xa kufikwa kwizinto zamatye zendalo. IMarble iza nemibala eyahlukeneyo, emhlophe iyeyona ithandwayo kuzo zonke. Ipateni yayo eyahlukileyo ye-veining kunye ne-swirls engaqhelekanga inceda ukuzisa umdlalo weqonga ukuhamba kwiishawa nakwizindlu zangasese. Olu hlobo lwelitye lendalo lijongeka limangalisa ngakumbi xa lisetyenziselwa ukufezekisa ukubonakala okufanayo. Sebenzisa uhlobo olufanayo lweemabula emgangathweni, iindonga kunye neetafile zivelisa uyilo oluhambelanayo notshintsho olugudileyo.
Kuba ukuhamba kwimvula kuhlala kuchanekile emanzini, kungcono ukuthatha unyango oluyimfuneko ukuqinisekisa ukhuseleko olufanelekileyo kwilitye lakho. Ukugcina ukubonakala kwelitye lendalo xa uhamba ngeshawa, ukutywinwa kwamaxesha ngamaxesha kuyafuneka. Ilitye elingatywinwanga linokubangela ukuba amanzi angene umphezulu, ngaloo ndlela libangela uqhekeko. Qinisekisa ukuba unxibe ilitye lakho ngetywina elifanelekileyo ukuze uqiniseke ngomgangatho ongapheliyo.
Iinkcukacha zokwakha zeGothic ngokuqinisekileyo zenza olu loyilo lokuhlambela lube lolunye-uhlobo, kwaye ngandlela thile lukuse kumatshini wexesha. Uninzi lwamagumbi okuhlambela adibanisa iintlobo ezahlukeneyo zokugqitywa kwiindonga zayo, kodwa olu luyilo luyi-90% eyakhiwe ngetayile enye emdaka. Kuphela yindawo yeshawari yaphantsi kunye neethayile zodonga ezahluke kancinane kwezinye.
Le ndawo yeshawari inokuba ncinane, kodwa ibinako ukwandisa indawo ebinomda, kwaye isakwazi ukukhupha indawo entle kuyo. Ngenxa yendawo encinci, igumbi lokuhlambela ligcina isikimu sombala wegolide / otyheli ukuze singabonakali sixakeke kakhulu. Oku kuthetha ukuba iindonga, ibhentshi eyakhelwe-ngaphakathi kunye nokubunjwa kwamatye konke kwenziwe ngegranite yegolide. Umgangatho, nangona kunjalo, wongeza ubume ngakumbi njengoko usebenzisa iithayile ezinamacala amathandathu akhaphukhaphu kwaye engathathi cala kumbala.
Le ndlu yokuhlambela idibanisa ngokuthe ngqo kwigumbi lokulala ngokuvula i-arched, eyenza ukuba ifikeleleke ngokuthe ngqo kwaye ibonakale kwigumbi lokulala. Indawo yokuhlambela yindawo elula evaliweyo, enendawo yokuphakama kweglasi kunye neethayile zamatye ezindongeni zayo zonke. Ngaphandle kokusebenzisa iithayile ezifanayo kuyo yonke indawo yeshawari, iipateni ezahlukeneyo apho iithayile zazibekwe khona zisenza ukuba kubonakale ngathi ineentlobo ezahlukeneyo zokugqiba eziqhubekayo.
Le ndlu yokuhlambela encinci inokuba kubungakanani obuncinci, kodwa uyilo lusakwazi ukubukeka lihle. Indawo yeshawari inehafu yesahlulo esenziwe ngeglasi engaphantsi kwesakhelo. Iindonga zazinxityiswe kwiithayile ezikhanyayo zelitye lentlabathi, ngelixa imigangatho yenziwe ngamacwecwe amancinci wesilayidi esimnyama, yongeza ubume ngaphezulu.
Usebenzisa uhlobo olufanayo lweetayile ze-sage travertine tiles kuyo yonke indawo yokuhlambela, esi sithuba sanamhlanje silawula ukwenza uyilo olulula kodwa olunomtsalane. Kanye ecaleni kwendawo yokuhlambela okweqanda, yindawo ende yokuhlambela ilungele abantu aba-2 okanye nangaphezulu. Yahlulahlulwe ukusuka kwigumbi lokuhlambela ngokwesahlulelo seglasi esenziwe ngentsimbi.
Le ndlu yokuhlambela incinci ilula, isebenzisa iithayile zeceramic ezimhlophe ezindongeni zeendonga zayo, kunye nomtya ocacileyo wamatye amnyama kwikhonkrithi embindini naphantsi. Ngenxa yendawo emxinwa, akukho sithuba sikhulu seishelufu, ngenxa yoko kwasetyenziswa i-niche yodonga endaweni yoko.
Le ndlu yokuhlambela inendawo entle enomdla. Iindonga ezimbini zijikelezwe lilize neekhabhathi ezingaphezulu, kunye nokulungiswa kwezipili kunye neesinki. Umthi wagqitywa nge-oki emnyama, wenza umahluko omnyama ngokuchasene neendonga ezinemibala ye-oatmeal. Imigangatho ziithayile zegranite ezimdaka ngegolide, apho ibhafu yokuhlalisa ihleli kanye embindini, intengiso ibekwe ngokuchasene nezahlulo zeglasi zommandla weshawari.
Le ndlu yangasese iya kujonga i-rustic yanamhlanje kunye nokukhetha kwayo kugqityiwe. Olunye udonga olunefestile enkulu lusebenzisa iithayile ezizodwa ezibonakala ngathi ziingceba ezindala ezenziwe ngomthi, ezinceda ukongeza ubukhulu kunye nokuthambeka kumphezulu. Igumbi lokuhlambela liphela lisebenzisa i-satin yokugqiba iithayile zelitye lentlabathi kumgangatho kunye nodonga, kwaye lisebenzisa indawo yokuhombisa yobhedu kunye nezixhobo.
Endaweni yokuya kwiglasi ebiyelweyo eli litye lihamba ngeshawa lisebenzisa ikhethini elilula.
Ukuhamba ngokunethezeka kwimvula kaninzi kusetyenziswa iintlobo zamatye ezingaqhelekanga ukubonisa ubuntu babo kunye nesitayile. Ukuya ujongeke ngakumbi, le ndawo yokuhlambela isebenzisa igranite ebomvu kwiifom ezahlukeneyo. Isilayidi esibomvu esisilayidi sasetyenziselwa indawo yokuhlambela kunye namanyathelo aso, ukujija indawo yokuhlambela isebenzisa i-30 × 30 lenyengane ebomvu ezindongeni nakwisilingi, kunye nezicucu ezincinci ze-10 × 10 kumgangatho wayo, ukwenza ipateni enomdla kunye nokuthungwa ngaphandle kwento efanayo.
Ukuhamba ngobunewunewu kwimvula kuyaziwa ngokuba kukhulu ngokwaneleyo ukuba kunganela abantu ababini ngexesha lamava othando. Indawo yokuhlambela iyahamba ithambe kwaye ifudumale, isebenzisa iithayile zendalo kuwo onke imigangatho kunye nodonga, kwaye ukongeza nje ithayile egudileyo phakathi kweefowuni ezimbini eziseludongeni. Ngaphandle kokulula koyilo, ubuhle bendalo beethayile zelitye legranite Kwanele ukunika le ishawa imvakalelo entle.
Enye into edumileyo yokuhamba kwiishawari ziithayile. Iithayile zinokuba ze-ceramic, i-porcelain, i-mosaic, i-subway, ilitye lendalo okanye ilitye le-faux. Iithayile zongeza oonobumba abohlukeneyo ekuhlambeni isitya, kuxhomekeke kubume bayo nakwizixhobo. Ikwafumaneka ngokubanzi ngemibala eyahlukeneyo kunye neepateni ezivumela ukhetho oluninzi malunga noyilo. Ukongeza koku, iithayile ziyafumaneka ngokulula kwiivenkile zokuphucula ikhaya kunye nabathengisi.
Ubuhle akusoloko kufuneka bulingane ngokulinganayo, kwaye olu loyilo lwendlu yangasese bubungqina bokuba. Umgangatho ziithayile zemabhile ezimhlophe ezilula, ngelixa udonga sisiqingatha seethayile zentsimbi engaphantsi kwegreyini, kunye nokugqitywa kwepeyinti yesiqingatha sokhilimu. Iindonga zommandla weshawari, nkqu nesilingi yayo ikwambathiswe ngeethayile zangaphantsi ezingwevu zentsimbi engwevu, ngelixa imigangatho yayo isebenzisa iithayile ezincinci zemabhile emarmore.
Le ndlu yokuhlambela ine-vibe engaqhelekanga kunye ne-back-back vibe kuyo, eyenza ibonakale ngathi ayisiyondawo yokuhlambela. Ubukhulu becala ityhilwa ebusweni ukuba uninzi lweendonga zazipeyintwe ngombala okhanyayo we-mocha, endaweni yokuwugquma ngamatye okanye iithayile. Ngokuchasene nebhafu yindawo yokubasa umlilo kunye nomabonwakude okuvumela ukuba uhlambe, ngelixa indawo yokuhlambela isesithuba ngasemva kwendawo yokuhlambela ngeethayile ezimhlophe kunye nebhentshi ehleliyo.
Le ndlu yangasese yangoku inomxholo ocacileyo wobudoda owenzayo kwiithayile zayo ezimnyama kunye ezimnyama. Ukuhamba kweglasi kwisitya sokuhlambela kunodonga olunomtsalane lweetayile ezimnyama ezijongeka zintle kwaye zijongile ibhafu enkulu evaliweyo.
Le ndlu yokuhlambela inokuba ncinane, kodwa ngokulula kwayo, kukho ubuhle kwakhona. Iindonga ezinemibala ye-oatmeal zongeza ukufudumala kwisithuba, ngelixa iifestile ezinkulu ezinombono wesibhakabhaka sedolophu zibonelela ngokukhanya kwendalo kwigumbi lokuhlambela. Imigangatho nesiqingatha seendonga zambathiswe ngethayile emhlophe yokugqiba iithayile ze-porcelain, ngelixa ukufakwa kwethayile yebhafu kuneenkozo ezimnyama kuyo. Indawo yeshawari incinci kwaye ilula, enesahlulelo seglasi esenziwe ngentsimbi kunye nentloko yeshawari yemvula enamathele eluphahleni.
Inokuhonjiswa ngobunewunewu nobuhle, olu luyilo lwendlu yangasese ngokuqinisekileyo luya kukwenza uzive ungowasebukhosini ngalo lonke ixesha. Iindonga zigqityiwe ngobugcisa bepeyinti emarmore, kwaye kukho iikholamu zemarble zokuhombisa, iinkcukacha ezibaziweyo kunye nekhandlela. Iifestile zayo ezinkulu zigutyungelwe ngamakhethini anzima, zongeza ukuthamba kunye nobuhle kwisithuba. Indawo yokuhlambela, xa ithelekiswa nebhafu, ilula ngakumbi. Isebenzisa iithayile ze-porcelain kumgangatho wayo kunye nodonga, ngetreyini ye-accent / iithayile zomda. Inesahlulelo seglasi esingaphantsi kwesakhelo kwaye isebenzisa izixhobo ze-chrome zegolide ukudibanisa nomxholo wegumbi lokuhlambela.
Le ndlu yokuhlambela inkulu ikwanendawo yokuhlambela ebekwe kanye embindini wegumbi. Kukho izinto zokubala ezingento kumacala omabini endawo yokuhlambela, kwaye phakathi kwendawo yeshawari kunye nebhafu yokuhlambela eqhagamshelwe ngokuthe ngqo ngaphambili kwendawo yokuhlamba. Ishawa isebenzisa ulungelelwaniso olunombala oluhlaza-ungaphantsi-kwezahlulo zeglasi kunye neethayile ezimnyama ezimdaka ngombala ezimnyama ezineetayile ezimhlophe.
Le ndlu yangasese elula inokuba ncinane esithubeni, kodwa inikezela ngeendlela ezahlukeneyo kunye neepateni, ivelise uyilo olunomdla kakhulu. Umgangatho okhethiweyo ngumthi ogqiba iithayile zeceramic kumbala othuthuyo, ukunika igumbi lokuhlambela isibheno se-rustic. Iindonga ubukhulu becala zazipeyintwe ngombala ongwevu okhanyayo, kunye netafile engelutho yagqitywa kumnyama wengue, ukuyenza ukuba ibonakale kwimibala ekhanyayo. Kukho udonga lwesandi esinee-cream slate tiles, kunye nendawo yeshawari evaliweyo eneetayile ezimhlophe ze-ceramic ezindongeni kunye neetayile ze-mosaic phantsi.
Iithayile zikaMoses zizisa isigxina esomeleleyo nesibindi semvula. Ukuba ufuna ukutsalela ingqalelo ekuhambeni kwakho kwishawa, ke le yinto efanelekileyo kuwe. Zikhethwe kakhulu kungekuphela nje kwisibheno sabo esibonakalayo kodwa nakwizibonelelo zazo ezifanelekileyo ngokunjalo. Iithayile zikaMoses azinyibiliki, zihlala ixesha elide kwaye azinyangeki.
Iithayile zikaMoses ziyafumaneka kuluhlu olubanzi loyilo kunye nemibala emininzi. Abanye banesiphumo se-metallic shimmer ngelixa abanye benembonakalo ebengezelayo. Ngokumalunga nesicelo, inokusetyenziselwa ukugubungela iliso eligcina udonga lwentetho okanye udonga. Iithayile zemibala zinokudityaniswa kwaye zifaniswe ukuvelisa iipateni ezizodwa ezifanelekileyo uyilo lokuhamba kwakho kwishawa kunye nencasa yakho yobuqu. Iithayile ze-mosaic zeglasi, ngakumbi, zinempawu ekhanyayo ebonisa ukukhanya kakuhle ngaloo ndlela itsalela u-ewe kwaye ivelise umphumo omangalisayo kwigumbi lokuhlambela. Iithayile zikaMoses ziyafumaneka ngokubanzi kubathengisi beethayile zasekhaya kwaye zitshiphu xa kuthelekiswa nezinye izinto.
Ngokufana nendawo yokuhlambela eluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe, le bhafu yanamhlanje iphuma kunye nokusetyenziswa kweethayile zemibala, kuphela le isebenzisa igolide nomdaka endaweni eluhlaza namhlophe. Ngenxa yokuba 1 udonga olukhulu sele luxakekile nge-mosaic tile cladding, yonke indawo yokuhlambela isebenzisa iithayile ezilula ze-beige ukuhlawula.
Ukuhamba ngokunethezeka kwimvula kunye nomsebenzi onzima weetayile zesiko kwenza umbono. Ukusetyenziswa kweethayile ezinesimo sengonyama ezinamaphiko eludongeni lwale shawa kunika oku kuzwakala kuphakathi empuma, ngakumbi kuba isebenzisa iithayile ezifudumeleyo kuyo yonke indawo yangasese. Iindidi zeethayile zegolide / ezimdaka ngombala zazisetyenziswa kumgangatho kunye nasezindongeni, kwaye zagxininiswa ngombala omnyama ukunceda ukuqhekeka iipateni zemosisi ezixakekileyo.
Njengeminye yemizekelo edlulileyo, olu luyilo lokuhlambela lukhangeleka lupholile kwaye luyahlaziya, ikakhulu ngenxa yepeyinti eluhlaza okwesibhakabhaka esetyenzisiweyo ezindongeni zonke. Kuba indawo yeshawari yahlulwe kakhulu kwindawo yonke, ibhafu iphela ivakala ngathi yindawo yokuhamba enkulu enephedi encinci yokuhlamba. Indawo yokuhlamba inkulu ngokwaneleyo ukuba inganela abantu ababini ngexesha, kwaye yagqitywa ngelitye lomlambo ezindongeni zidityaniswe neethayile ezimnyama nezesilivere.
Iithayile zikaMoses azongezi nje uyolo kuyilo lwakho lokuhlambela, kodwa yongeza ubume kunye nephethini kwisithuba. Lo mzekelo uyindawo encinci yeshawari, eyenziwe yanomdla ngakumbi ngokudityaniswa kweethayile ezimbini zemosaic: iithayile ezimhlophe zomgangatho phantsi, ibhentshi kunye nodonga lwe-aksenti, kunye neethayile zemibala emininzi yemibala yeendonga ezimbini, ezinde kunye nezigoso.
Uyilo lokuhlambela olunethoni efudumeleyo ludala ifuthe lepikseli kwishower yayo ngokusebenzisa indibaniselwano yethayile enombala omdaka kunye nokhrim kuzo zonke iindonga nophahla lwayo. Oku kunceda indawo yeshawari ibe yindawo ekugxilwe kuyo kuyo yonke indlu yangasese. Indawo enkulu yeshawari inezahlulelo zeglasi, iithayile ezimhlophe zemibala kwimigangatho yayo, kunye nebhentshi yokuhlamba ngaphakathi.
Endaweni yokudibanisa ngwevu nomhlophe, le ndawo yokuhlambela isebenzisa iblue blue ukutshatisa ukugqitywa okumhlophe kwale ndawo yokuhlambela. Imigangatho yiphatheni yebhodi yokujonga iithayile ezimhlophe zemabhile kunye neethayile zeblue eziluhlaza. Eyona nto ikhethekileyo kule ndawo yokuhlambela, nangona kunjalo, iya kuba kukusetyenziswa kwayo ngenkalipho kweethayile zemibala eluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe ezinokubonakala kwiindonga zebhafu yonke, zenze umphumo wepikseli kumphezulu wayo.
Ngokwenkcazo, iithayile zangaphantsi ziithayile ezincinci ezisikwe koxande ezi-intshi ezi-3 ngo-6 intshi ngobukhulu. Oku kwenziwa ngeceram ecekeceke kwaye kuyaziwa ngokulula kunye nobuhle beklasikhi. Ngokwesiqhelo ngombala omhlophe, iithayile zangaphantsi zixhaphake kakhulu kuba ihamba nokuhamba kakhulu kuyilo lokuhlamba kunye nezitayile zangasese. Ukongeza kuloo nto, iithayile zendlela engaphantsi komhlaba kulula ukuzicoca, ukumelana nokufuma kunye nebala elinganyangekiyo.
Xa isetyenziselwa ukuhamba kwimvula, iithayile zendlela engaphantsi komhlaba zinegalelo ekubukekeni okwenza igumbi lokuhlambela likhangeleke ngakumbi kwaye libonakale likhulu. Lo mbandela usebenza kakuhle ekudaleni iindonga ezifihlakeleyo.
Indawo ezinesitayile sotshintsho zihlala zilungelelanisa umbala ongwevu nomhlophe njengolu hlobo loyilo lokuhlambela. Kwimigangatho yokwenziwa komhlaba, idibanisa iithayile zemarble zesikwere kunye neetayile ze-chevron ezinemilinganiselo yeethayile, ngelixa indawo yokuhlambela idibanisa iithayile ze-mosaic kunye neethayile ezimhlophe zangaphantsi ezimhlophe ezindongeni. Ibhafu yokuhlamba ezimeleyo ibekwe kwindawo yefestile ye-bay ukuze ikunike umbono wegadi.
Uyilo oluhle lwesitayile sotshintsho oludibanisa uyilo lwangoku kunye neziqwenga zakudala kunye neenkcukacha. Umgangatho ophambili wegumbi lokuhlambela usebenzisa iithayile ezinemibala yeetshokholethi ezimnyama ezingama-30 × 60, ngelixa indawo yokuhlambela efakwe ngokupheleleyo isebenzisa iithayile zendlela engaphantsi eluhlaza yeglasi ezindongeni zayo, indlela yangaphantsi yemabula kwi-zocalo nophahla, kunye neethayile ezimhlophe zemigangatho.
Le ndlu yangasese inezitayile zakudala ngokuqinisekileyo ibonisa ubungakanani obungaphelelwa lixesha loyilo lwesintu. Ukuhlengahlengisa umbala omhlophe-mhlophe ukuze uqaqambe kwaye uhlaziye ukuziva unokuphela wenza indawo ibonakale buthuntu, kodwa ngokusetyenziswa kweethayile ezimhlophe zebhasikidi yokuluka kwimigangatho nakwikhabhathi yaseFrance kulilize, kukho ubume obaneleyo kunye nephethini ehamba kwisithuba. Indawo yokuvasa evaliweyo isebenzisa iithayile zomgangatho ofanayo wokubhaka kunye nokudibanisa kunye neethayile ezimhlophe zangaphantsi ezindongeni zayo. Ukunika ubuntu obuncinci, ikhandlela yekristale ibekwe embindini wesilingi.
Amagumbi okuhlambela anezibane ezihonjisiweyo - Iingcamango zoyilo lwegumbi lokuhlambela - Amagumbi okuhlambela aneeChandeliers - I-25 entle yoyilo lweGumbi lokuhlambela - Iingcamango zokuhlambela ngegumbi lokuhlambela
ndinxiba ntoni emtshatweni
Ukutshintsha igama kupapasho kwiindleko zamaphephandaba
Isipho somtshato wesithathu kuye
Uthini umahluko phakathi kwe-ms kunye ne-miss